သင်နှစ်သက်သောအားကစားသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ပါစေအားကစားကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အထူးရည်ရွယ်ထားသည်။ ဤအထူးကဏ္forတွင်ရှာဖွေနေသောဘောလုံးသုံးစွဲသူများအားအထူးရည်ရွယ်သည်။ ဘောလုံးအားအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည့် Android အတွက်ကောင်းသော application တစ်ခု.
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လျှောက်လွှာဖြစ်ပါတယ် Llama အခမဲ့တိုက်ရိုက် S (အားကစားအွန်လိုင်း)ဘောလုံးသည်အခမဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လူသိများကျော်ကြားခြင်းမရှိဘဲပုံရိပ်အရည်အသွေးကောင်းခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင်ကိုနှိပ်ပါလျှင် "ဆက်ဖတ်ပါ" ဒီ Android အတွက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခမဲ့ application ရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့် application ကိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ရန်လင့်ခ်ကို APK format ဖြင့်ရှင်းပြပါမည်။
1 Libre မှတိုက်ရိုက် S ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
2 Libre Directo S ကိုဘယ်လို download လုပ်ပြီး install လုပ်မလဲ။
Libre မှတိုက်ရိုက် S ကဘာကိုကမ်းလှမ်းပါသလဲ။
မစဉ်းစားမဆင်ခြင်နိုင်သည့်ပါဝါဖြစ်နိုင်ခြေအပြင် ဘောလုံးအားအခမဲ့ကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် Google Chromecast နှင့်လိုက်ဖက်သောဗွီဒီယိုများကိုစီးဆင်းစေသည်။ အခမဲ့တိုက်ရိုက် Sလျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်၎င်းအားပြသနိုင်သည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြထားသောရရှိနိုင်သည့်အဖြစ်အပျက်များမှရိုးရှင်းသည့်မီနူး မှနေ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအားကစားပွဲများကိုမိမိတို့ထုတ်လွှင့်သည့်အချိန်တွင်အဆင်ပြေစွာစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။
အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် ၎င်းကိုရိုးရှင်းသော manual installation နှင့် run ပါ ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုဘဲနှင့်စတင်ခံစားလိုပါက။
Libre Directo S ကိုဘယ်လို download လုပ်ပြီး install လုပ်မလဲ။
မသန်စွမ်း အခမဲ့ Direct S ကို download လုပ်ပါAPK ဒေါင်းလုပ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ရန်သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ Android terminal တွင်ထည့်သွင်းရန် အောင်မြင်သော download အသိပေးချက်သူ့ဟာသူအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပထမ ဦး ဆုံး install လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တွေကို enable လုပ်ရပေမဲ့၊ မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များသင်၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များတွင်လုံခြုံရေးကဏ္inမှသင်ရရှိနိုင်သောခွင့်ပြုချက်အချို့။
ဒေါင်းလုပ် - အခမဲ့တိုက်ရိုက် S.apk, ကြည့်မှန်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » APK » ဘောလုံးကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်
ငါက install လုပ်ဖို့သွားတဲ့အခါသူက aptoide လို့ပြောတယ်။ အဲဒါမှန်သလား။
မှန်ကန်သော apk သို့မှန်ကန်သော link ကို ကျေးဇူးပြု၍ ????
download လုပ်ထားသော Aptoide apk ကို install လုပ်ပြီးပါကသင် run ရန်ပေးလိုက်ပါ။ Aptoide သည် Libre Directo repository နှင့် apk ကို Android သို့တိုက်ရိုက် download လုပ်ရန် option တွင်တိုက်ရိုက်ပွင့်လာလိမ့်မည်။
ဟေ့လူတွေ၊ ငါ့ chromecast နဲ့ထပ်တူပြုဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါမှာ Libre direct app နဲ့ပြproblemနာတစ်ခုရှိနေတယ်၊ ၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ရုပ်မြင်သံကြား၌ပုံရိပ်ကိုမပြီးဆုံးနိုင်ပါ